•• မိုးမှုန်တွေကြားမှ တောင်ကိုးလုံး ⛰ – YANGON STYLE
•• မိုးမှုန်တွေကြားမှ တောင်ကိုးလုံး ⛰
တောင်ကိုးလုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ U U Ye Kalawthar Trekking Service ကိုပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ တစ်နှစ်တခါ မိုးတွင်းရောက်ပြီဆို တောင်ကိုးလုံးတက်ဖို့ ခရီးစဉ်လေးတွေ စပြီး booking ထားလို့ရပါတယ်။ ၂ ရက်တည်းဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေအတွက်လဲအဆင်ပြေ 😎 တောင်ကိုးလုံးဆိုပြီးလဲ မလန့်သွားနဲ့ဦးနော် 🤫 သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ် Package ကိုတော့ အောက်မှာ Details Link ပေးထားပါတယ်နော် 🤗🤗
ကလောကို ဘယ်လိုသွားပြီး ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ?
ပထမဦးဆုံး ရန်ကုန် – ကလော အသွားအပြန် ကားလက်မှတ်ဝယ်ရပါမယ်။ ဦးရဲရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ကားလက်မှတ်တော့မပါပါဘူး။ ရန်ကုန် – တောင်ကြီး ကားလက်မှတ်တွေကတော့ ဘယ်ကဝယ်ဝယ် ဝယ်လို့လွယ်ပါတယ်။ လက်မှတ် ဖြတ်ရင်တော့ ညနေ ၇နာရီကားကိုဖြတ်ပါ။ အဲ့ဒါမှ ကလောကိုမနက်စောစောရောက်ပြီး နားမယ့်အချိန် ပိုထွက်လာအောင်ပါ။ ကလောရောက်ရင် ကားသမားကို Winner Hotel ရှေ့ဆင်းမယ်လို့ကြိုပြောထားပါနော် 😉 ရောက်တာနဲ့ ဦးရဲကိုဖုန်းဆက်လိုက် သူလာကြိုပြီးသားပဲ။
ဂပီးရင်တော့ ခဏနားမယ့် Inn or Guest House တစ်ခုကိုလိုက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။တစ်နာရီအချိန်ပေးတယ် အဲ့မှာပဲ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး ရွာမှာ ညအိပ်မယ့်ဝတ်စုံတစ်စုံရယ် နောက်နေ့ပြန်ထွက်လာမယ့် ဝတ်စုံတစ်စုံရယ် ထုတ်ထားပါ။ ဦးရဲတို့ ယူသွားပေးပြီး ရွာကိုပို့ပေးထားကြမှာပါ။ ကိုယ်တွေကတော့ Backpack လေးနဲ့ ရေဘူးလေးရယ် လိုတာလေးရယ်ပဲထည့်သယ်သွားတာပေါ့။ ကျန်တာတော့ အထုတ်တွေပိုသေးရင် တည်းတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့လိုက်တယ်။ စိတ်ချရတယ် သူတို့သိမ်းထားပေးပါတယ်။
မနက် ၈နာရီထိုးတာနဲ့ တည်းတဲ့နေရာကို ကားလာခေါ်တယ်။ ပီးရင်တော့ ပျော်ပျော်ကြီး ကလောဈေးမှာ မနက်စာသွားစားကြတယ် 🤩 တစ်ယောက်တည်းသွားလဲ အေးဆေးပဲ ဟိုရောက်ရင် အပေါင်းအသင်းသစ်တွေရမှရပဲ😎 ကလောဈေးရောက်ရင်တော့ ရှမ်းစာတွေ ရှယ်ဆွဲပေါ့။ ပြီးရင် တောစီးဖိနပ်မပါလာတဲ့သူတွေက စစ်ဖိနပ်တွေလိုက်ဝယ်ကြတာပေါ့။ ၈ခွဲကျော်ကျော်လောက်မှာ ဈေးကပြန်ထွက်ပြီး တောင်စတက်မယ့် နေရာကို ကားနဲ့ ခရီးဆက်လာခဲ့ပါတယ်။ တောင်စတက်မယ့် နေရာရောက်တော့ ဦးရဲက မိုးကာတွေ Walking Stick တွေအကုန်ပေးပါတယ်။ ရေဘူးတွေလဲပေးပါတယ်။ အဲ့ရေဘူးကတော့ နောက်နေ့ ကလောကိုပြန်တဲ့အထိသုံးရမှာပါနော်။ လမ်းမှာ လွှင့်ပစ်လာလို့မရပါဘူး။ ရေထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ 🤓
တောင်ကိုးလုံးရှိရာတောင်တန်းကြီးကတော့ တစ်ဖက်မှာ မန်းလေးတိုင်းနဲ့ တစ်ဖက်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိတာ Border လိုင်းကြီးပေါ့။ဟိုဘက်ကိုကြည့်ရင်ရှမ်းပြည်၊ ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင် မန်းလေး 🤩ဒီတောင်ကို ခဲဖြူတောင်လို့လဲ အရင်ကခေါ်ပါတယ်။ အဲ့တောင်က အရင်က ခဲထွက်တယ်တဲ့ 😱
ပြီးရင်တော့ ဦးရဲပြောတဲ့ စကားလေးတွေ နားထောင်ပြီး အားလုံး walking stick ကိုယ်စီကိုင်ကာ ပျော်ရွှင်စွာ တောင်တက်ကြပါပြီ 😻 ကဲ တောင်စစတက်ခြင်း တောင်ကမတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ နဲနဲပင်ပန်းပြီး မောတာပေါ့။ ဖြည်းဖြည်းပဲတက်ပါ အကုန်စောင့်ပေးကြပါတယ်။ Guide ကလဲ ၄ယောက်လောက်ပါတယ် အေးဆေးပဲ 🤗 အစနဲ့တင် တော်တော်ပင်ပန်းနေလို့ မကြောက်လိုက်ပါနဲ့ 😂 အပေါ်ရောက်သွားရင်လမ်းဖြောင့်လေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက် ရှုခင်းကြည့်လိုက်နဲ့ လျှောက်သွားလိုက်တာများ တောင် ဘယ်နှစ်လုံး ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်းတောင်မသိဘူးရယ်။
တစ်ယောက်ထဲ လာတာမလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လား?? မပူပါနဲ့ ဦးရဲနဲ့ ကိုစည်သူ ဆိုတဲ့ Guide တွေရှိတယ်။ အကိုရေလို့ ခေါ်ပြီး ရီသာပြလိုက် 😝😝😝 post လေးအဆင်သင့်ပေးပြီးစောင့်နေ လာရိုက်ပေးပြီးသားပဲ။ အကုန်လုံးက Family type မလို့ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပေ ၆၀ဝ၀နီးပါး တစ်တောင်တက် တစ်တောင်ဆင်း ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးပါပဲ။ တောင်အောက်က view တွေကလဲ မြူတွေဖုံးသွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ မိုးမှုန်တွေကြားမှာ အားလုံးက အမှတ်ရစရာကောင်းနေမှာအမှန်ပါ😍 တောင် ၇ လုံးမြောက်လဲကျရော မိုးတွေပိုရွာပါလေရော။ မိုးတွင်း တောင်တက်ရတဲ့ Feeling လေးကတော့ so good ပေါ့ 😬
တောင်ကိုးလုံး ကုန်မှ အောက်ကရွာမှာ ထမင်းစားရမှာဆိုတော့ စားချင်စိတ်ကလေးနဲ့သာလျှောက်ပါ😝
ဓာတ်ပုံအရိုက်ကောင်းတာ ကိုယ်တွေ နောက်ဆုံးမှရောက်သွားပြီး စားရတယ် 🤣🤣🤣
တောင်ခြေကရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေ့လည်စာစား၊ ခဏနား အိပ်တဲ့လူကအိပ်ကြနဲ့ပေါ့။ ကျွေးတာတွေကလဲ ကျေးလက်အနံ့အသက်တွေနဲ့ ဖက်ထမင်းထုပ်၊ အချိုပွဲတွေနဲ့ရှယ်ပေါ့ 🤤 ပီးတာနဲ့ နေ့လည် ၃ နာရီလောက်မှာ အိပ်မယ့် ရွာကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုက်တင်းနေတော့ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေပေမယ့်လဲ ရွာလမ်းတွေ၊လယ်ကွင်းတွေ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေက ဦးနှောက်ကို ပြန်လန်းဆန်းစေတာတော့အမှန်ပဲ။ နေရာတိုင်းက ဓာတ်ဖမ်းချင်စရာ😻
လျှောက်ရင်းနဲ့ပဲ ညနေစောင်းတော့ ရွာကအိမ်ကိုရောက်ပါပီ 🤗 ကလောက ပေးလိုက်တဲ့အထုပ်တွေကလဲ ရွာကအိမ်ကိုကြိုရောက်နှင့်နေပီလေ။ ရောက်တာနဲ့ အထုပ်ချ ရေချိုးဖို့လုကြရင်း ပျော်စရာကြီး 😬
မိန်းကလေးတွေကို အခန်းပေးထားပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ အပြင်မှာတန်းစီ အိပ်ကြပေါ့။ အင်တာနက်လိုင်းကလဲမမိ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက် ရင်းနှီးမှုနဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုပိုရစေပါတယ် ☺️ သူငယ်ချင်းတွေ အဖွဲ့လိုက်လာရင်လဲ ပိုပြီး နွေးထွေးမှုရစေတာပေါ့။ ကဲ ရေမိုးချိုးပြီး ၇ နာရီလောက်ကြ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ညနေစာ စကောထမင်းကို အဝလွေးကြပါတော့တယ် 😁 တနေကုန်ပင်ပန်းထားတော့ ဘာစားစားကို အရသာရှိနေတာ။ အချိုပွဲလဲပါသေးနော် ငှက်ပျောသီးမီးတောက် 🤩 မီးတွေအကုန်ပိတ် ငှက်ပျောသီးမီးတောက်တာကိုကြည့်ပြီး မီးငြိမ်းရင်စား အိုး so good ပေါ့ 🤤 ဦးရဲက ကော့တေးလဲ တိုက်သေးတယ်ဗျ လောကစည်းစိမ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုခေါ်တာထင်တယ်။ မြို့ပြရဲ့မွန်းကြပ်မှုတွေ social media တွေနဲ့ဝေးရာက တစ်ညတာလေးပေါ့။ ပီးရင် မအိပ်ကြသေးဘူး အကုန် ဂိမ်းတွေဆော့ကြ ရှုံးတဲ့လူနဖူးတောက်ကြ။ သရဲအကြောင်းတွေ ပြောကြနဲ့ ပါလာသမျှလူတွေနဲ့ အကုန်ခင်သွားကြတာပေါ့ 😁 ည ၁၀ နာရီလောက်ကြ မီးလဲပိတ် အကုန်ပင်ပန်းပီး တစ်ချိူးတည်းပဲ အိပ်ရော 🙄
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ မျက်နှာသစ်သွားတိုက် မနက်စာစားပြီး ၈ နာရီလောက်မှာ အပြန်ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ် ☺️ အပြန်တောက်လျှောက်လဲ ကိုယ်တက်လာခဲ့ရတဲ့ တောင်ကိုးလုံးကိ်ုမြင်နေရတယ်။ ဖီလင် အမေးဇင်းပေါ့။ အပြန်လဲ နားကြ လျှောက်ကြ ရီကြ မောကြနဲ့ အရမ်းကိုပျော်ရပါတယ်။ ရာသီဥတုလေးကလဲ အုံ့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်ရတာကလဲ အရမ်းမိုက်။ ဒီလိုနဲ့ ၂ နာရီလောက် လမ်းလျှောက်ပြီးတာနဲ့ လာကြိုတဲ့ ကားတွေနားရောက်လာပါတော့တယ်။ တောင်တန်းတွေကို နှုတ်ဆက်ရင်း လွမ်းစရာကြီးပေါ့။ ကလောရောက်တာနဲ့ ရေမိုးချိုး အနားယူပြီး နေ့လည်စာစားကာ ကလောမြို့အနှံလျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးရဲတို့ပဲလိုက်ပို့ပေးတာ။ ဓာတ်ပုံတွေလဲရိုက်ပေး ပျော်တာပေါ့နော်။ ညနေဆို ဟော့ပေါ့ဆိုင်ခေါ်သွားပေးတယ်။ အဝကြိတ်ပဲ ပြီးတော့ ညနေ ၇ နာရီကားနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ် 😎
U U Ye Kalawthar ဆိုတဲ့ Page ရှိပါတယ်။ အပတ်စဉ် ခရီးစဉ်တွေရှိပါတယ်။ Details plan တွေ Discount တွေလဲရှိပါတယ်။ သဒ္ဓါတို့ဆို 50% discount နဲ့တိုးလို့ ရှယ်ပဲ။ 09258310379 ဦးရဲဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့လဲ Booking တင်လို့ရပါတယ်။ မိုးတွင်းသီးသန့်ခရီးလေးမလို့ မိုးရာသီမှာ ဘယ်သွားရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူလဲအမြန်ပြည့်တက်လို့ သူ့ Page ကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီး မြန်မြန်လေးသာ ဒိုးလိုက်ပါ။ Recommend ပေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေပဲအဖွဲ့လိုက်ဒိုးမလား? တစ်ယောက်ထဲပဲဒိုးမလား? Couple တွေပဲ Ro မလား အားလုံး အိုကေတယ်။ ကဲ မိုးမှုန်တွေကြားက တောင်ကိုးလုံးကို အခုပဲ သွားလိုက်တော့ ဘော်ဒါတို့ရေ 😎😎😎
➡️ အမှိုက် လုံးဝ လုံးဝ ပစ်မချပါနဲ့
➡️ ဖြစ်နိုင်ရင် ရေစိုခံတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ယူသွားပါ။
➡️ ဗိုက်ဆာတတ်ရင် အဆာပြေမုန့်လေးတွေယူသွား
➡️ အားသွင်းစရာနေရာလုံးဝမရှိပါဘူး power bank
➡️ ဖြစ်နိုင်ရင် AirPlane Mood လုပ်ပြီး ဖုန်းအားကို
❤️ အမှိုက်တွေကို မိမိ အိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီး ယူသွားခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပါ ❤️
အဆုံးထိ ဖတ်ပေးလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
မြူမရှိတော့ရင် အပြေးအလွှားသွားရိုက် မန်းလေးဘက်အခြမ်းပေါ့
ဟိုးမှာ အတန်းလိုက်ကြီး ရှေ့ကအဖွဲ့
တက်လာခဲ့တဲ့ တောင်ကိုးလုံးကို ပြန်မြင်ရတဲ့အခိုက်တန့်
ထမင်းစားဖို့ သွားနေတဲ့အဖွဲ့ရယ် ပဲပေးကောင်းနေတဲ့ ကိုယ်ရယ်
ဒါကတော့ ရှယ် ညစာ
ကော့တေးနဲ့ ငှက်ပျောသီး မီးတောက်
ဒါကတော့ ဆယ်လီ ယဲယဲပါ 😝
လက်ထဲက ငှက်ပျောသီး ၂ လုံးက အသက်ပါနော် U U Ye Kalawthar Trekking Service
ဟိုက်ရား ဒီတောင်တွေကိ်ု မေကျော်ကာဖြတ်ပမယ်
ဟိုးမှာကြည့် ကိုယ်တွေတက်လာခဲ့တဲ့ တောင်ပေါ့
ဘာတဲ့ Wanderlust Thader
ဟိုးမှာ ကားအဖြုလေး လာကြိုနေပီ
အဆုံးထိဖတ်ပေလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်